Golaha Deegaanka Hargaysa Oo Ka Heshiiyay Khilaafkii Hadheeyay Iyo Xildhibaan Dogox Oo Gaar U Baxay | Somaliland Today
← Maanta Oo Kale Ayaa La Aasaasay Golaha Qaramada Midoobay , Maxay Tahay Farriinta Banki Moon??
Nin Isku Dayay In Uu U Dhaco Aqalka Cad Oo Ay Weerareen Eyda Iyo Ilaalada Sirdoonka. →
Golaha Deegaanka Hargaysa Oo Ka Heshiiyay Khilaafkii Hadheeyay Iyo Xildhibaan Dogox Oo Gaar U Baxay
(SLT-Hargaysa)-Xildhibaannada Golaha Degaanka Caasimadda Hargeysa, ayaa ka heshiiyey khilaaf si weyn u kala qaybiyey oo ka dhex qarxay horraantii toddobaadkan.
Kulan-qayilaadeed ay gelinkii dambe ee maalintii Arbacada isku soo horfadhiisteen Maayar Soltelco oo ay wehelinayeen mudanayaasha Golaha Degaanka ee la safan iyo xildhibaannada ka soo horjeeday, ayaa labada dhinac heshiis buuxa kaga gaadheen khilaafkii muddada toddobaadka ah kala irdheeyey.
Ma jiro wax war ah oo dhinacyadu ka soo saareen kulankaas oo aan saxaafadda loo oggolayn iyo waxyaabaha lagu heshiiyey toona, kuwaas oo maalmihii u dambeeyey warbaahinta isu marinayey eedaymo kala duwan.
Hase ahaatee, ilo-wareedyo xogogaal ah ayaa Jamhuuriya u xaqiijiyey shalay, in kulan-qayilaadeedkaas oo ay ka qaybgaleen aqlabiyadda xildhibaan ee Golaha Degaanka Hargeysa labada geesood ee khilaafku u dhexeeyey isku weydaarsadeen doodo iyo falanqayn dheer, xal kama dambays ahna kaga gaadheen is-maandhaafkii kala irdheeyey, kadib markii dhinacyadu isaga tanaasuleen arrimaha ugu waaweyn ee khilaafkoodu salka ku hayey.
Maayar Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco) ayaa la sheegay inuu isaguna dhankiisa aqbalay wax-ka-qabashada qaar ka mid ah qoddobadda ugu waaweyn ee xildhibaannada ka soo horjeeday ku eedeeyeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin; isku-shaandhaynta guddi-hoosaayada Golaha Degaanka, dhismaha guddi hantidhawr gaar u ah golahooda oo aan hore u jirin iyo in laga shaqaysiiyo guddiga jaangoynta hawlaha iyo mashaariicda horumarineed ee dawladda hoose fuliso goluhu yeesho.
Maayar Soltelco ayaa si buuxda u ballanqaaday qoddobaddaas oo uu fulintooda u muddeeyey bisha January ee sannadka soo socda ee 2015, ballanqaadyadaas oo xildhibaannada mucaaradka ahna ku qanceen, kadibna labada dhinac si niyad-sami ah isu gacan-qaadeen, uguna heshiiyeen in meesha laga saaro khilaafkii u dhexeeyey, isla markaana la soo celiyo wada-shaqayntii iyo midnimadii Golaha Degaanka Hargeysa ee murankoodu dhaawacay.
Geesta kale, fadhi Golaha Degaanku yeelan lahaayeen Khamiistii shalay oo qayb ka ahaa kalfdhigooda 8-aad, ayaan ka qabsoomin kadib heshiiska la sheegay in labada dhinac wada gaadheen.
Fadhigaasi oo qorshuhu ahaa in lagu soo gunnaanado doodaha ajandaha kalfadhiggooda u dambeeya sannadka 2014-ka, ayaa la wariyey in arrimo farsamo darteed loo baajiyey kadib markii lagaga wahadlay kulanka ay ku heshiiyeen Maayarka iyo xildhibaannada ka soo horjeeday, balse waxa lagu wadaa in toddobaadka soo socda uu qabsoomo.
Dhinaca kale, Xildhibaan Saleebaan Cabdillaahi Daahir (Dogox) oo ka mid ah mucaaridka Golaha Degaanka Hargeysa oo saxaafadda la hadlay shalay, ayaa tilmaamay in aannu shaqsi ahaan ka qaybgelin kulanka lagu heshiisiiyey maayirka iyo xildhibaannada ka soo horjeeday, isagoo xusay in aan wixii sharcigu jideeyey laga heshiin karin, wax gorgortan ahna laga gelin karin, balse xildhibaannada iyo maayirku ka heshiin karaan waxyaabaha shaqsiga ah ee arrimo sharci khusayn.
“Khilaafaadka qaar waa laga heshiin karaa, qaarna heshiis ma galaan. Khilaafka dad u dhexeeya qofku waa inuu mar walba diyaar u ahaado in la isku laab-xaadhnaado oo laga wadahadlo, lagana heshiiyo oo aanay noqon shakhsi weerar marka sharci la isweydiiyo, markaa waa laga heshiin karayaa, waxaanna igu maqaale ah in shalay (maalintii Arbacada) la heshiiyay, inkasta oo aanan annigu meesha joogin oo aan fadhigaa ka maqnaa.
Laakiin, waxaan laga heshiin karin oo aan tanaasul la galin karin, wada-xaajoodna aan gali karin wixii sharciga ku qoran. Shuruucda aannu Maayarka ku haynay tanaasul ma geli karaan, Xildhibaanno kama heshiin karaan, anniguna kama heshiin karo. Baarlamanka uun baa ka heshiin karaya oo ka wada hadli karaya, markaa in sharciga sidiisa loogu dhaqmo lagama heshiin, una malayn maayo in laga heshiin karayo. Sharciguna haddii uu jabnaa, halka lagu qabto ayaa lagu saxayaa, markaa xeerarkaas la arkay in la jabiyay waa in immika la saxo ayaan annigu taaganahay,” ayuu yidhi xildhibaan Saleebaan Dogox.